Amanzi olwandle | Ngeentlanzi
Njengoko sonke sisazi ukuba zikhona iintlanzi zamanzi amnandi kunye nentlanzi yetyuwa. Zombini zinokubakho kwi-aquariums. Ngenxa yoku kufuneka sazi yonke into esiyifunayo kuhlobo ngalunye lwe-aquarium. Kwesi sithuba uya kufumana yonke into oyifunayo ukuba ne I-aquarium yolwandle apho iintlanzi zethu zihlala ngoxolo kunye neemeko ezilungileyo.
Iingcebiso, iinkcukacha kunye nemibono yezilwanyana ukonwabela indawo yokuhlala efana kakhulu nendalo, Siyazi ukuba ayifani kodwa ukuba siyayithanda intlanzi, yindlela elungileyo yokubakhathalela, ukukhangela ulwazi malunga nesihloko kunye neempawu ekufuneka sizazi ukuze iintlanzi zolwandle zikwazi ukuphila kwi-aquarium yethu yaselwandle.
Asinakulibala loo nto zizinto eziphilayo Kwaye kufuneka sibakhathalele ukuze bangafi kwilinge okanye kwiminqweno yokugcina kwabo ekuthinjweni.
Skimmer kwi-aquarium yakho
Kukho izinto ezahlukeneyo eziyimfuneko ekusebenzeni kakuhle kwe-aquarium. Into nganye inemisebenzi yayo kwaye izinzisa iimeko ...
Xa kuziwa ekuqaliseni kwilizwe le-aquarium, kufuneka sazi ukuba kukho iintlanzi zamanzi amancinci kunye ...
Ukukhanyisa kwi-aquarium kudlala indima ebalulekileyo kubomi beentlanzi zethu. Ukujonga ukukhanya nge ...
por IsiJamani sasePortillo yenzayo 4 iminyaka .
Unokuthatha isigqibo sokuba nokuba unamanzi acocekileyo okanye i-aquarium yetyuwa. Ukuba ukhetha oku ...
Olunye lweempawu ezizodwa zentlanzi ebomvu yeepensile ngumbala wayo. Kunye nemivimbo emithathu emnyama emnyama ethe tyaba ...
Xa uxhobisa i-aquarium, ungalibali ii-substrates. Kwimarike kukho uluhlu olubanzi ...
Isilivere yeArgos yintlanzi lukhetho olufanelekileyo kubazalisi bamanzi amatsha abafuna ukuqala ukungena ...
Umbala we mullet onombala
Nangona i-mullet ingezizo iintlobo ezifanelekileyo zokuzalela kwi-aquarium. Kodwa, umbala wayo wokubonisa wenza ...
Ukukhanyisa kwi-aquarium kubalulekile ukufezekisa indawo efanelekileyo yaselwandle. Ngamaqela ahlukeneyo ahlukeneyo ...
Iintlanzi ezintathu ezinomsila
Intlanzi enemisila emithathu yintlanzi encinci, malunga neesentimitha ezingama-20, enomzimba oxineneyo kwaye ...
Intlanzi yaseSerrano yosapho lakwaSerranidae
Intlanzi yeserano, igama layo lingu-serrano scriba, luhlobo lomzimba odibeneyo, nangona utyebile ...
Intlanzi yeRazor, enye yeentlobo ezimangalisayo
Sijonga unonkala waseYeti
Enye yezona ntlobo zidumileyo, yiSole